Akụkọ - Usoro iwepu okwute n'ime igwe eji egwe ọka
Na igwe ntụ ọka, a na-akpọ usoro nke iwepụ nkume na ọka wit de-nkume. Enwere ike wepu okwute na obere okike dị iche iche karịa ọka wit site na ụzọ nyocha dị mfe, ebe ụfọdụ okwute nwere nha ọka wit chọrọ ngwa ọrụ mwepụ nkume pụrụ iche.
Enwere ike iji De-stoner mee ihe site na iji mmiri ma ọ bụ ikuku dị ka ọkara. Iji mmiri eme ihe dị ka ọkara iji wepu okwute ga-emerụ akụrụngwa mmiri ma ọ dịkarịghị etinye ya. A na-akpọ usoro iji wepụ okwute site na iji ikuku dị ka ọkara usoro akọrọ. A na-eji usoro akọrọ eme ihe ugbu a na igwe ọka, ihe kachasị na ya bụ igwe na-ewepụ okwute.
Destoner na-ejikarị ihe dị iche na ọsọ nke nkwụsị nke ọka wit na nkume dị na mbara igwe iji wepu nkume, na usoro ọrụ kachasị mkpa bụ sieve elu nke okwute ahụ. N'oge ọrụ ahụ, onye na-ewepụ okwute na-ama jijiji n'otu ụzọ a kapịrị ọnụ ma na-ewebata ikuku na-arị elu, nke a na-enyocha site na ọdịiche dị na ọsọ nkwụsị ọka na nkume.
Họrọ usoro na igwe nri ọka wit
N'ime usoro nhicha ọka wit, a na-akpọ ntụpọ na-adịghị ọcha site na ọka wit na ngwaọrụ site na ọdịiche dị n'ogologo ma ọ bụ ọka. Unyi ndị a ga-ewepụ site na ngwa ndị ahọpụtara na-abụkarị ọka bali, ọka oat, hazelnuts, na apịtị. N'ime adịghị ọcha ndị a, ọka bali na hazelnuts bụ nri, mana ntụ, agba na uto ha nwere mmetụta dị njọ na ngwaahịa a. Ya mere, mgbe ngwaahịa a bụ ntụ ọka dị elu, ọ dị mkpa ịtọ nhọrọ na usoro nhicha.
Ebe ọ bụ na nha urughuru na nkwusioru nke adịghị ọcha dị ka nke ọka wit, o siri ike iwepu site na nyocha, iwepụ okwute, wdg. Ngwongwo a na-ejikarị eme ihe na-agụnye igwe silinda na-arụ ọrụ na igwe ngbanye gburugburu.
Post oge: Mar-10-2021